Tuhun laga qabo kor u kac miisaaniyadda ceeymiska xanuunka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tuhun laga qabo kor u kac miisaaniyadda ceeymiska xanuunka
La daabacay onsdag 21 augusti 2013 kl 09.24
Hayadda ceeymiska qaranka ayaa kor u qaaday saadaalinta miisaaniyadda ay hayaddu saadaalinayso inay ku bixi doonto ceeymiska xanuunka ee sannadka foodda innagu soo haya.
Middaasi oo la fileyo iany sabab u noqoto kor-u-kac ku yimaada miisaaniyadda ku bixi doonta gunnooyinka lagu bixiyo ceeymiska xanuunka, sida uu sheegay Jan Larsson, ahna wakiilka waaxda saadaalinta ee hayadda ceeymiska qaranka (Försäkringskassan).
– Saadaalinta aannu soo ban-dhigney ayaannu aad kor ugu qaadney miisaaniyadda ku bixi doonta gunnada xanuunka qaasatan, sida uu sheegay Jan Larsson.
Miisaaniyadda la hadal hayaa waa mid intee le’eg?
– Saadaalin aan sameeyey xilligii gu’ga ee sannadkii hore oo aan u barbar-dhigney midka iminka lagu jiro ee sannadkan 2013 ayuu nooga muuqdey farqi gaareya 1 bilyan oo koron iyo sannadka 2014 oo la saadaalineyo 2,8 bilyan oo koron.
Waxaa sannadkii saddexaad kor u sii kacaysa tirada dadyoowga xanuunka ku qoran.Tirada dadyoowga xanuunka ku qoran ayaa u dhigantaa kuwii horraantii sannadihii 2000, hase yeeshee ay aad kor ugu kici doonta miisaaniyadda hayadda ceeymisku u gudbin doonto dawladda ee sannadkan iyo sannadka foodda innagu soo haya.
Waana farriimmaha xanuunnada maskaxda oo kor u kacey midda ugu wacan in hayaddu kor u qaaddo saadalinta miisaaniyadda hayadda ceeymiska qaranka, sida uu sheegay Jan Larsson:
– Tusaale ahaan dhibaatooyinka ey keenaan xanuunnada kadeedka (stress) oo kor u kacey marka loo barbar-dhigo xanuunnada kale ee maskaxda. Waxaa haddaba jira saansaamo cusub ee keeney in saadaalinta kor loo qaado.
Kor u kaca miisaaniyadda ee sidaa u ballaaran, hal bilyan sannadkan iyo qiyaastii saddex bilyan sannadka foodda innagu soo haya oo la geli doono doorasho ayaa gacmaha ka xirxiri doona dawladda sidii ey miisaaniyadda ugu doorasho geli lahayd. Khudbaddiisii kuleeylaha ee madaxa dawladda Fredk Reinfeldt uu dhowaantan ka jeediyay magaaladaGustavsberg ayuu kaga digay inuu jiri doono dhaqaale aan sidaa u badneyn ee howlo lagu maal-gelin karo.